Baarlamaanka Puntland oo aqbalay codsi uga yimid Madaxweyne Deni – Kalfadhi
January 22, 2019 January 22, 2019 Kalfadhi
GAROWE, 22 JAN 2019 (KALFADHI)-Golaha Wakiilada ee Dowlad Goboleedka Puntland ayaa maanta waqti kordhin u sameeyay Madaxweyne Saciid Cabdullaahi Deni, si uu usoo dhismo Gole Wasiiro oo tayo leh madaama uu heer gaba-gabo ah joogo waqtigii ku cad dastuurka Puntland in lagu soo dhiso Golaha Wasiirada. Madaxweyne Saciid Cabdullaahi Deni ayaa hor-togay Baarlamaanka Puntland waxa uuna weydiistay in mudo kordhin loo sameeyo taas oo ay isku raaceyn Xubnihii kulanka ku sugnaa.
Madaxweynaha cusub ee Puntland ayaa hadal uu ujeediyay Xildhibaanada waxa uu ku weydiistay in loogu daro muddo 15 cesho ah, si Puntland ay u yeelato Gole wasiiro oo tayo leh sida uu hadalka u dhigay. ” Waxaan weydiisanayaa Baarlamaanka sharafta leh, in laygu daro muddo 15 maalmood oo dheeraad ah si aan usoo dhiso Xukuumad Tayo leh ” ayuu yiri Madaxweyne Deni oo ka hor hadlayay Baarlamaanka Puntland.
Saciid C/llaahi Deni ayaa sidoo kale sheegay inuu wada-tashi iyo xooraansi uu la yeeshay qeybaha Bulshada Puntland si ay Xukuumadiisa uga soo dhax-muuqdaan aqoonyahaano ay ka go’antahay badbaadinta Puntland. Waxaa kale uu sheegay iney ka go’antahay in fursad la siiyo cid kasta oo wax ku soo kordhin karta Puntland.
“La tashiyo ayaa ka sameeyay nuuca wasiirada aan u baahanahay, waxaan ogaaday in Puntland ay dooneyso Gole wasiiro oo badbaadiya, waxaana balan qaadayaa inaa idin horkeeno wasiiro lagu kalsoonyahay”, ayuu yiri Madaxweynaha Puntland oo maanta waqti dheeraad ah weydiistay Baarlamaanka maamulkaasi.
Guddoomiyaha Baarlamaanka Puntalnd ayaa sheegay in 45 Xildhibaan ay ogolaatay in waqti kordhin loo sameeyo Madaxweynaha si uu u soo dhiso Xukuumadiisa, waxaa diiday 1 Xildhibaan, waxaana ka aamusay 4 Xildhibaan sida uu ku dhawaaqay Guddoomiyaha Baarlamaanka Puntland.
“Madaxweynaha xildhibaanadu waxay isku raaceyn in loogu daro 15 cesho, 45 ayaa Haa u codeysay 1 ayaa ka diiday, afarna waa ka aamuseen”, ayuu yiri Guddoomiyaha Baarlamaanka maamulka Puntalnd Axmed Karaash. Madaxweyne Deni waxaan kaaga fadhinaa Xukuumad u shaqeyso Puntland kana saarta dalka iyo dadka dhibaatooyinka ka jira Puntland” ayuu hadalkiisa raaciyay Guddoomiyaha Baarlamaanka Puntland.
Saciid Cabdullaahi Deni waxaa Madaxweynaha Puntland loo doortay 8dii Bishaan markaas uu ka guuleestay 20 musharax ilaa hadana ma dhicin Munaasabadda caleema-saarkiisa. Madaxweynaha ayaa kordhiyay kulamadiisa wadatashiga ah ee ku aadan dhismaha Gole Wasiiro oo tayo leh. ka hor 15-ka cesho ee la siiyay ayaa la filayaa inuu ku soo dhiso Golahiisa Wasiirada sida uu maanta sheegay Guddoomiyaha Baarlamaanka Puntland.
Aqalka Sare: Ma ogolaan karno in Kenya ay burburiso hantida Shirkadaha Soomaaliyeed
Xildhibaan Mahad Salaad oo si kulul uga hadlay fal kufsi fool xun oo ka dhacay Guriceyl